"Ixabiso eliphezulu" kwigumbi lokuhlambela, liyamangalisa, ngaba lukhona uhlobo oluLungileyo engqondweni yakho?
Ikhaya / Blog / "Ixabiso eliphezulu" legumbi lokuhlambela, liyamangalisa, ngaba kukho uhlobo olulungileyo engqondweni yakho?
"Ixabiso eliphezulu" legumbi lokuhlambela, liyamangalisa, ngaba kukho uhlobo olulungileyo engqondweni yakho?
2021 / 04 / 10 uhleloBlog 3164 0
Iintloko zegumbi lokuhlambela iXiaoxin
Ukusuka: eMilan Design Tour
Indlu yangasese yanamhlanje
Igumbi lokuhlambela likwindawo ebalulekileyo kubomi bethu basekhaya, kwaye ulungelelwaniso kunye noyilo lwazo zikwanxulumene ngokusondeleyo nempilo yethu. Ngokusekwe kwithoni yendlela yokuhlambela enemibala e-2020, imeko yegumbi lokuhlambela ngo-2021 ineenkcukacha ezingaphezulu: uyilo luya lusiba lula ngakumbi, umzekelo, uyilo olucekeceke oluzimeleyo luzakusetyenziswa; izixhobo zokuhlambela ezimibalabala, izitya, iipompo, izindlu zangasese njalo njalo.
Kwixesha elidlulileyo, uyilo lwendlu yangasese, ubukhulu becala ilitye lokupeyinta, uninzi lwazo lumnyama, mhlophe, ngwevu imibala emithathu, kodwa ngotshintsho lwefashoni, ubuhle babantu buye batshintsha, uninzi lwabanini lukhetha umbala odongeni olwenzelwe ukudala igumbi lokuhlambela .
Ikamva lesithuba sokuhlambela kwinqanaba loyilo lwehlabathi: Igumbi lokuhlambela alisekho lodwa, indawo yabucala, efihliweyo emva kwendlu. Ngapha koko, inxulunyaniswe ngokungenakwahlukaniswa namagumbi okulala okanye amanye amagumbi, kwaye inokuba yindawo yomda phakathi kwegadi kunye nokuhamba kwamanzi.
Umkhwa oye waqwalaselwa kakuhle kwimifanekiso yoyilo kunye nokuhonjiswa kwendlu yokuhlambela kukuba bayanda ngakumbi abayili abafuna uburhabaxa kunye neendawo ekugxilwe kuzo kubukho bendalo. Ubume oburhabaxa bala matye, amatye kunye nezixhobo zinokuzisa ukubamba kwendalo kunye nokulinganisela kubomi bethu obuphezulu, obuphezulu bobuchwephesha, obuzisa ukuvuseleleka ezingqondweni zethu.
Omnye wemibuzo ebaluleke kakhulu ejongene nabaqulunqi namhlanje yindlela yokufumana indawo yokuhlala encinci ngaphandle kokubingelela ubunewunewu kunye nesitayile? Ukukhula okungazange kubonwe ngaphambili kokufudukela kwabantu ezidolophini kunye nokusikelwa umda kwezindlu kuzisa lo mbuzo kwaye kubonelela ngamathuba obunomdla wokuyila.
Ngaphambili :: Awazi ukuba uyikhetha njani ibhafu? Ezi modeli zingama-31 zikunika ukuphefumlelwa next: Ukulungiswa kwakhona kwegumbi lokuhlambela, imivumbo emi-5 yokufumana utshintsho oluhle
Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela i-16 "Iinkcukacha zikaThixo", Yenza into eyiyo, ...
2021 / 04 / 22 2195
Yehlabathi Lokuqala! Indawo yokuhlala ekhuselekileyo kunye neluncedo yokuhlambela, ukuze ukwazi “...